Sidee hoos loogu dhigaa iOS 9.1 ilaa iOS 9.0.2 | Wararka IPhone
Sida had iyo jeer, marka nooc cusub oo iOS ah la sii daayo, waxay abuurtaa kuwa raacsan iyo kuwa wax u dhimaya. Nooca IOS 9.1 wuxuu ku yimid qalabkeenna 19:00 fiidnimo shalay. Waxa kale oo ay u badan tahay inaad si ula kac ah u soo dejisay oo aad u rakibtay macruufka 9.1 waxaadna helaysaa dareenka ah in qalabkaagu uu ku xumaaday waxqabadka. Shakhsi ahaan, haddii aad si joogto ah noo akhrido waxaad awood u yeelatay inaad u fiirsato inaan qoray maqaal muhiim ah oo aan runtii si fiican uga hadlay macruufka 9.1, laakiin qalab kasta waa adduun, sidaa darteed haddii aadan jeclayn wax macruufka 9.1 sabab kasta ha noqotee, ama waxaad jiiday nooc ka mid ah cilladaha ama dhibaatada waxaadna doorbideysaa inaad ku laabato macruufka 9.0.2, xitaa haddii kaliya aad sameysid Jailbrea, taleefanka iPhone News waxaan kuugu keenaynaa cashar ku saabsan sida looga laabto iOS 9.1 iyo iOS 9.0.2.
2 Sida hoos loogu dhigo macruufka 9.1 ilaa iOS 9.0.2
Ma awoodi doontid inaad dib ugu noqotid nooc kasta kahor iOS 9.0.2, maadaama aysan saxeexin, markaa soo degsashada nooc hore wax kuu tari maayo.
Waxaan kaliya hoos u dhigi karnaa macruufka 9.0.2 inta lagu jiro waqtiga yar ee Apple iyo server-keeda ay xaqiijinayaan noocaan, markaa haddii aad ka fikireyso inaad soo degsato nooca iOS-ka waa hadda ama marna.
Ha iloobin inaad sameyso nuqul ka mid ah qalabkaaga macruufka ah ee ku jira iCloud ama iTunes, hadba kii aad jeceshahay inta badan ama abuuro kalsoonida ugu badan ee adiga kugu jirta.
Xusuusnow in tani ay horseedeyso luminta howlaha amniga ee cusboonaysiin kasta.
Si aad u ogaato in nooca iOS 9.0.2 uu wali saxeexan yahay, waad geli kartaa LINKAN oo hubi.
Ka soo dejiso iOS 9.0.2 ilahaaga caadiga ah ama www.GetiOS.com
Waxaan kala soo baxnaa barnaamijka 'iOS 9.0.2 firmware' bogagga hore loogu taliyay. Xusuusnow inaad soo dejiso midka u dhigma qalabkaaga, si aad u ogaato inaad eegi karto xarfaha lagu soo bandhigay dhabarka qalabka.
Qalabka ku dheji qaabka DFU: Si tan loo sameeyo, qalabka ku xir iTunes si aad uhesho, ka dibna dami intaad ku xiran tahay. Hadda u dir guriga + badhanka korontada oo la riixay 10 ilbiriqsi kadibna muddadaas kadib sii daayo badhanka Power, laakiin ha u dirin badhanka Guriga, illaa sawirka iTunes lagu soo bandhigo shaashadda iPhone.
Hadda iTunes, marka qalabka ku xiran yahay oo la ogaado, guji "Soo Celinta iPhone" oo leh "Alt" furaha la riixay haddii aad isticmaasho MacOS ama "Shift" haddii aad isticmaasho Windows.
Xulo feylka .psw ee aad soo dejisay oo sug inta ay soo celinayso.
Iyo voila, waxaad joogi doontaa iOS 9.0.2, uguyaraan inta nuqulkan la saxiixay, si aad u qaban karto Jailbreak, iyo waxyaabo kale, oo lagu xiray iOS 9.1.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida hoos loogu dhigo macruufka 9.1 ilaa iOS 9.0.2
Hagaag tani horeyba waa sindios!
Si aad u ogaato in nooca iOS 9.0.2 uu wali saxeexan yahay, waad geli kartaa LINKAN oo hubi…. xiriiriyahee?
Ku jawaab elkin gomez
Halkaas waxaad kala soo soo bixi kartaa dhammaan macruufka aaladaha kala duwan oo tilmaama kuwa weli la saxiixay https://ipsw.me/
waxtar leh dijo
Shaki, ma jiraa qof isku dayay iOS 9 iPad 2?
Hadda waxaan joogaa iOS 7 waxaanan ka fiirsanayaa cusbooneysiinta iOS 9 si aan u helo barnaamijyo cusub ama cusbooneysiin dalab oo laga yaabo in la sameeyo mustaqbalka.
Adeegsiga aan hadda u adeegsado daalacashada, twitter-ka, tapatalk, youtube-ka, iyo ciyaaraha fiidiyaha. Waxaan ka faaloodaa tan waxqabadka iyo kuwa kale.
Wixii talo ah?
Ku jawaab efrit
Yup, oo way fiicantahay
Jawaab José Adrián Mendoza García
Anigu ma cusbooneysiin doono ipad 2 illaa inta si cad loo sheegayo inay ka fiican tahay ios8. Weli waxaan kujiraa ios 8.1.2 hawada ipad kumana qanacsana 9.0.2 wixii aan aqriyay, waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo 7.1.2. Dhibaatadu waxay tahay inay kaaga tagi doonaan inaad ku xannibnaato barnaamijyo u baahan noocyo cusub oo OS ah. Marka laga soo tago inay sifiican u socoto waxaan rabaa inaan awood u yeesho JAILBREAK, wax muhiim ii ah.
Haa, sidoo kale waxaan rabaa in la xiro tan iyo markii aan iPad-ka u adeegsado Xarun Saxaafadeed oo aan ku rakibo XBMC. Taasi waa sababta aan u weydiisanayay inaan cusbooneysiiyo hadda laga bilaabo 7 illaa 9 maxaa yeelay 9.0.2 waxay leedahay JAILBILYS, laakiin 9.1 xilligan waxay yiraahdeen maya.
Laakiin way iga xanaaqsan tahay cusbooneysiinta barnaamijka iyo wixii la mid ah. In kasta oo adeegsiga aan ku siiyaa ay tahay marin dheeri sidaan hore u idhi oo aniga ilama lihid, laakiin haddii aan ku rakibo barnaamijyada ciyaarta guddiga oo waan inkaarnaan lahaa haddii aanan kuwa cusub lahayn anigoon dhex marin sanduuqa cusub. iPad si aan daacad u noqdo.
Raali noqo jaahilnimadayda, laakiin maxay macnaheedu tahay inaad ku raaxeysan karto ugu yaraan inta nuqulkan la saxiixay? Taleefankayga gacanta (Iphone 6) waxaa cusbooneysiiyay cusboonaysiinta waxaanan jeclaan lahaa inaan ku celiyo OS-kii hore.
Sikastaba waad mahadsantahay
Jawaab Daniel Ruiz
Haddii aan sameeyo keydka, xilligan dib u soo celinta waxba ma waayi doono mise waa inaan dib u cusbooneysiiyaa codsiyada?
Miguel, aad ayaad u mahadsan tahay wuu i caawiyay, Yurgen waxba ma lumiyo laakiin codsiyada sida cayaaraha ayaa sugaya inta wax walba laga soo dejinayo, waxaad arkaysaa astaamaha laakiin illaa inta laga soo dejinayo ma isticmaali kartid.
Ku jawaab Hevert
MARKII AAN SAMEEYO, WUXUU I SHEEGAA IN AAN LA ISKU QAWI KARNAYN, OO AAN KA SOO SAARAY ISKU PAGE ..
Waxay ii sheegaysaa isla wixii oo kale: in aysan iswaafaqsanayn waxaan kujiray ios 8.4 oo waxaan aaday ios 9.1 markii aan rabay inaan ku laabto macruufka 9.0.2 (oo aanan waligey ku haysan iphone-kayga) waxay ii sheegtaa inay tahay ma waafaqsana. oo hadda JAILBILAX ama na. aad uxun.
Galab wanaagsan, dhibaato ayaan qabaa waxaan ka soo degsadaa feylka bogga aad tilmaamtay, laakiin ma jiro wax feyl ah oo qaab ipsw ah oo gudaha ku jira, qof ma i caawin karaa? mahadsanidiin kahor.
Sideed u xalisay dhibaatadaada Ivan, isla waxbaa ii muuqda
Waxaan ku jiray macruufka 8.4 waxaanan aaday macruufka 9.1 markii aan rabayna inaan ku laabto macruufka 9.0.2 (oo aanan waligay ku haysan iphone-kayga) waxay ii sheegaysaa inaanay waafaqsanayn. oo hadda JAILBILAX ama na. aad uxun.
Isla waxaas ayaa igu dhacay saaxiib, xal ma heshay?
Ku jawaab jeison
Isla waxbaa igu dhaca, waxay ii sheegtaa inuusan la jaan qaadi karin laakiin wali waa la saxiixay ,,, waxba ma fahmin ,,, xalka ???
Haddii ay tiraahdo taasi maahan wax la jaan qaadi karo, waa sababta oo ah kuma soo degsanaysid macruufka ku habboon bartaada
Maya maya, waxaan haystaa iPhone 6 oo lagu daray waxaanan kala soo baxaa macruufkiisa oo waxaan ka sameeyay bogag kala duwan laakiin waxba.
Xitaa aniga ayey igu dhaceysaa aniga ipad mini-ga oo aan toos ugu cusbooneysiiyay macruufka 9.1 oo markaan rabo inaan dib ugu laabto macruufka 9.0.2 wuxuu ii sheegayaa inaysan la jaan qaadi karin.
Waxaan kaloo helayaa khaladka ah in firmware uusan iswaafaqi karin, waxaana hubaa 100% inaan soo degsaday midka iska leh iphone-kayga iyo inaan cadeeyay inuu yahay iphone 5s GSM nooca oo aan ka soo dagsaday firmware-ka iyo waxba, Waxaan helayaa isla eroor! Ma jiraa qof yaqaan wax xal ah, waa tan iyo markii aan dhigay ios 9.0.2 batterigeygu wuu yaraa waxaanan doonayay inaan arko haddii u dhigayo iphone cusub ay xallinayso haddii aanan cusbooneysiin doonin macruufka 9.1 oo aan sugayo in xabsiga laga sii daayo laakiin ma jecli inaan jeelka runta ka waayo ...
Haye, waxaan ku jiraa IOS 8 Miyaan ku soo celin karaa 9.02 adoo ku dhejinaya iPhone-ka qaabka DFU? Mise, markii Apple joojiso saxeexa ikhtiyaarka kaliya ayaa ah in lagu soo celiyo IOS 9.1? Mahadsanid
Waxaan ku jiraa isla xaaladdii! si qalad ah ayaan ugu cusbooneysiiyaa iPhone-kayga macruufka 9.1 Waxaan rabaa inaan hoos u dhigo laakiin iima oggolaaneyso, waxay calaamadeysaa qalad, aadna waan u hubaa haddii aan soo dejiyo software-ka la tilmaamay ... waxaan rabaa inaan dib ugu laabto 9.0.1. XNUMX, qof ayaa leh xiriiri uu ku soo dejisan karo aniga oo aan khalad hubin? MAHADSANID!!!
Jawaab Erik Hernandez
raali noqo iOS. 9.0.2
Dib uma noqon kartid maadaama Apple ay joojisay saxiixa noocaas. Salaan. Had iyo jeer xusuusnow in, marka Apple joojiyo saxiixa software, mar dambe ma awoodi doontid inaad soo laabato (maaha habka caadiga ah)
Sidee kale ayaan ugu noqon karaa macruufka 9.0.2, waa deg deg
wali waad yareyn kartaa 9.1 ilaa 9.0.2 ma ii sheegi kartaa, mahadsanid
Wanaagsan, shalay waxaan ku jiray bakhaar tufaax ah maxaa yeelay shaashadda iphone 6 ayaa jabtay.Waxay i siiyeen mid cusub oo lamid ah. Kahor intaanan isbadalka sameynin waxaan keyd ku sameeyay icloud.
Hadda waxaan shidaa taleefanka gacanta cusub, mana haysto hal sawir oo carada ah. Intaas oo keliya maahan, laakiin waxaan qaadaa sawirro cusub oo iyagu ma tagayaan ciribta.
Faylasha wada hadalada WhatsApp ee kaladuwan sidoo kale waa la waayey. Waan la soo xiriirayaa oo haddii, tusaale ahaan, aan haysannay 500 faylal, weli waxaan hayaa 500 faylal, laakiin waxaan u furaa inaan arko iyaga iyo fagaarayaasha cadcad oo leh calaamadda su'aasha cawlan.
Horaa qof ugu dhacday?
Ma taqaanaa sidaad ii caawin lahayd?
Ma la qaban karaa?
Waxaan haystaa 9.1-da 4-ta sano bil ka hor aad ayayna iigu xumaatay; way ka gaabinaysaa. Marka, waxaan rabaa inaan ogaado noocee hore ayaan dib ugu laaban karaa maanta? 🙁 iyo muxuu noqon lahaa xiriirka soo degsashada? Fadlan, runtii waan ku qanacsanahay.
Way fiicantahay in sida sharraxaadda wanaagsan ee fudud ay sidan ku sii socoto
FullFolder9, ku muuji barnaamijyo badan fayl